Fiakaran’ny maripànan’ny tany: Mivoaka eny amorondranomasin’i Egée ao Chalcidique, Gresy, ny lelon-dranomasina · Global Voices teny Malagasy
Miha-betsaka kokoa noho ireo tamin'ny taona teo aloha ny lelon-dranomasina
Voadika ny 24 Septambra 2021 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, Français, Español, Română , English
Lelon-dranomasina eny amorondranomasina manelanelana ani ‘Chaniotis (Hanioti) sy Pefkochori, Chalcidique, Gresy tamin'ny volana Septambra 2021. Saripikan'i Meta.mk, CC BY-NC.
Ity tantara ity dia nalaina avy amin'ny fitantarana voalohany nataon'ny Meta.mk. Navoaka eto indray ny lahatsoratra nasiam-panovana eo ambany fifanarahana fifampizarana votoaty misy eo amin'ny Global Voices sy ny Metamorphosis Foundation.
Mipoitra hatrany any amin'ny morontsiraka Grika nandritra ny fahavaratra 2021 ny raotra madity antsoina hoe lelon-dranomasina, fantatra ihany koa amin'ny mucilage marin, izay vokatry ny fiakaran'ny maripanan'ny tany. Mampiseho ny sarin'ireo morontsiraka sasany ao amin'ny saikinosy Chalcidique (Halkidiki) tamin'ity volana Septambra ity fa mamoaka raotra organika tsindraindray ny Ranomasina Egée.
Nampifandray ny fisehoan'ny lelon-dranomasina tamin'ny fiakaran'ny maripanan'ny tany ny mpahay siansa. Mampitombo ny hafanan'ny ranomasimbe sy ny ranomasina ny hafanan'ny atmosfera noho ny trangana etona avy amin’ny vohon’ny tany mihamafana, ka mahatonga azy ireo ho tsara kokoa ho an'ny zavamiaina bitika sasany izay mivelona amin'ny rano mafana kokoa, nefa sady koa mamorona tontolo tsy azo onenan'ireo biby sy zavamaniry hafa.
Misy ahidrano bitika fantatra amin'ny anarana hoe phytoplancton ny lelon-dranomasina. Tsy ny phytoplancton irery ihany no manimba tontolo iainana fa rehefa mifangaro amin'ny fiakaran'ny maripanan'ny rano, ny rano maloto, ny fanafody famonoana bibikely ary ny fiakaran'ny maripanan'ny tany izy io dia miroborobo ao anatin'ny fotoana fohy, ka misy fiantraikany amin'ny tontolovoary amin'ny zavamiaina, manakana ny tara-masoandro tsy hiditra anaty rano sy mampihena ny tahan'ny oksizena any anaty ranomasina.
Araka ny tatitra nataon'ny Poseidon System, tambajotram-pikarohana siantifika tohanan'ny fanjakana sy ny Vondrona Eoropeana izay manara-maso ny ranomasina Grika, ny onjan-kafanan-dranomasina tamin'ny tapany faharoa tamin'ny volana Jona 2021 dia nampitombo ny maripana ankapobeny amin'ny Ranomasina Egée ho 28 degre Celsius, izay nitombo 4 degre ambony kokoa noho ireo taona teo aloha.
Nilaza ny mponina eo an-toerana amin'ny tanàndehibe amoron-dranomasina ao Pefkochori izay niresaka tamin'ny ekipan'ny Meta.mk fa ny fanazavana nentim-paharazana momba ny lelon-dranomasina dia ny hoe “nilaza ireo renibe fa savony fotsiny avy amin'ny fanadiovana sambo izany.” Matetika tsy sahy miresaka momba ny lohahevitry ny lelon-dranomasina amin'ny vahiny ny olona eo an-toerana.
Lelon-dranomasina eny amorondranomasina manelanelana an'i Chaniotis sy Pefkochori, Chalcidique, Gresy tamin'ny volana Septambra 2021. Saripikan'i Meta.mk, CC BY-NC.
Tamin'ny volana Jona, nitatitra ny gazety Britanika Independent fa nanao fanadihadiana momba trangan'ny lelon-dranomasina any amin'ny rano akaikin'ny nosy Lemnos ny governemanta Grika.
Tamin'izany fotoana izany, nanoratra ny gazety Grika Ekathimerini fa vokatry ny fihoaran'ny otrikaina amin'ny ahidrano no mahatonga ilay tranga, izay avy amin'ny fandotoana sy ny hafanana ambony loatra, ary ny Ivotoeram-pikarohana momba ny Jono amin'ny anaran'ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana Grika no manara-maso izany.
In a statement for Ekathimerini, Stavros Stathakis, vice president of the association of fishermen on Limnos, warned that the sludge is hampering fishing and also putting off tourists:
Tao anatin'ny fanambarana ho an'ny Ekathimerini dia nampitandrina i Stavros Stathakis, filoha lefitry ny fikambanan'ny mpanjono ao Limnos, fa manelingelina ny jono ilay fotaka ary mampitsoaka mpizahatany:
Miforona matetika izy io saingy mihalevona rehefa afaka kelikely. Sambany tao anatin'ny folo taona no nahitanay izany betsaka.
Ny fiparitahan'ny lelon-dranomasina mitombo betsaka dia manondro ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro vokatry ny ataon'olombelona, ny fivoahan'ny gazy karbônika eny amin'ny atmosfera avy amin'ny fandoroana ireo solika fôsily (arina, solika, etona voajanahary) ary ny fametrahana ireo fako ao anaty ny rafi-drano.
Tsy nisy fiantraikany firy noho ny fihoaran'ny lelon-dranomasina tany amin'ny Ranomasina Marmara vao haingana tany Torkia izay mpifanolo-bodirindrina aminy ny fiparitahan'ny lelon-dranomasina any amin'ny Ranomasina Egée. Araka ny notaterin'ny Global Voices tamin'ny volana Jona, nanomboka nanao ny fanaraha-maso momba ireo ahiahiana ho loharanon'ny raotra ny manampahefana Tiorka ary koa nanao ny ezaka fanadiovana goavana. Nanome tsiny ireo olona sy ireo orinasa nanary fako tao amin'ny Ranomasina Marmara ho nahatonga ny firoboroboan'ny lelon-dranomasina ny filoha Tiorka Recep Tayyip Erdoğan.
23 Septambra 2021Belarosia